Iibhulashi eziPhambili zeFotohop: Ezi zezona zilungileyo kuwe | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iifoto zeBhotoshop ezilungileyo
Encarni Arcoya | 16/06/2021 08:34 | Amaqhinga
Ukuba uhlala rhoqo kwi-Photoshop, ngokuqinisekileyo enye yezinto ezinomdla kakhulu malunga nenkqubo ziibhulashi ze-Photoshop. Abagcini nje ngokugcina indawo, kodwa unokufumana indalo iphumelele kangangokuba abathengi bakho bakubone, okanye kunjalo?
Kodwa, Zithini iibrashi ze-Photoshop? Zeziphi ezona brashi zeFotoshop zibalaseleyo? Zingasetyenziswa njani? Siza kuthetha nawe malunga nayo yonke loo nto kunye nokunye okuninzi apha ngezantsi ukuze ube nembono elungileyo malunga nokuba ziyintoni kwaye ngaphezulu kwako konke ukukunika imizekelo yeebhrashi ezilungileyo kakhulu phaya.
1 Zithini iibrashi zeFotohop
1.1 Uyifaka njani ibrashi yeFotohop efanelekileyo
2 Eyona bhrashi yeFotohop ilungileyo yokupenda
2.1 Iifoto ze-Photoshop ezilungileyo kakhulu: Amanzi e-Waven
2.2 Iicarles marsal
2.3 Iifoto eziPhambili zeFotohop: UAaron Griffin
2.4 Iibhulashi zikaLilithDemoness
2.5 UBrittney Murphy Ink Brushes
2.6 Iibrashi zokwenyani nguEilert Janßen
2.7 Iibhulashi zolusu lomntu
2.8 Iibrashi zeFotoshop ezilungileyo kakhulu: Iipeyinti ezikhawulezayo
2.9 Iibhola zomoya
2.10 Iibhulashi ezineglasi eyaphukileyo
2.11 Ukutyala iibrashi
Zithini iibrashi zeFotohop
Iifoto ze-Photoshop zikwabizwa ngokuba ziibrashi. Ezi ziimilo ezicwangcisiweyo kwaye zongezwa kwisixhobo sebrashi seFotohop. Zininzi ezahlukeneyo, kwaye enyanisweni unokwenza eyakho kwaye wabelane ngayo nabanye.
Bakhonza yenza iimontage kunye nokuqamba ukwenza umfanekiso ubonakale unenyani ngakumbi okanye umnandi.
Uyifaka njani ibrashi yeFotohop efanelekileyo
Ukuba into oyifunayo ukufaka iibrashi esiza kuthetha ngazo ngokulandelayo, kuya kufuneka wazi ukuba uzongeza njani kwinkqubo. Into yokuqala ekufuneka uyazi kukuba ezi fayile ziphela nge .abr. Into ekufuneka uyenzile xa iibrashi zikhutshiwe kukuzibeka kwifolda yeFotohop brushes. Oku kuhlala kunjalo, ngokungagqibekanga, kwi-C: / iiFayile zeNkqubo / iAdobe / iAdobe Photoshop CC (uguqulelo) / iiPreets / iibrashi.
Sincoma ukuba, xa sele unayo, uyiqambe amagama ngamagama owaziyo, ngakumbi ukuba uneebrashi ezininzi. Ngoku, kuya kufuneka uvule kuphela inkqubo ye-Photoshop kwaye uya kuba nesixhobo sebrashi, kunye nesithuba esivela kwimenyu ephezulu. Ungabona lonke uluhlu ukuze ufumane le nto uyifunayo.
Eyona bhrashi yeFotohop ilungileyo yokupenda
Njengoko sisazi ukuba uyathanda ukusebenza, kwaye into oyifunayo kukwazi izixhobo onokuzisebenzisa xa usenza umsebenzi wakho, siza kuphawula nawe Zeziphi iibrashi ezingcono zeFotoshop Uninzi lwazo simahla, ke kuya kufuneka uyifumane, uyikhuphele kwaye uqalise ukuyisebenzisa. Abanye bahlawulwa, kodwa kufanelekile.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi ezizezona zilungileyo kuthi?
Iifoto ze-Photoshop ezilungileyo kakhulu: Amanzi e-Waven
Le brashi ungayisebenzisa ukuzisebenzisa ngokwakhoKodwa ukuba uqhagamshelana nomyili wayo, uMichael Guimont, unokukunika imvume yelayisensi yokuthengisa. Kuyo awuyi kufumana ibrashi enye, enyanisweni zininzi ngakumbi ezinika nayiphi na iprojekthi isiphumo esahlukileyo.
Ngale ndlela awuzukuhlala usenza iibrashi, kodwa sele uzenzile zonke (okanye phantse zonke).
El Ipakethi yebrashi kaCarles Marsal's Photoshop yenye yezona zigqibeleleyo phaya, kwaye ikuvumela kungekuphela nje ukuba neebrashi zelifu, kodwa kunye noburhabaxa, ukuxubeka phakathi kobugcisa kunye nokufota ...
Efanayo kakhulu naleyo kaJonas de Ro. Ngapha koko, kuthiwa iCarles Marsal's isekwe kule.
Iifoto eziPhambili zeFotohop: UAaron Griffin
Umyili wayo, u-Aaron Griffin, wenze ibrashi yakhe ye-Photoshop yasimahla kuzo zombini ezorhwebo kunye nokuzisebenzisa. Lo mzobi kunye nomculi weengcamango ubonakaliswe ngokumangalisayo komntu kwaye ngokuqinisekileyo, unikezela "izibonelelo" zakhe mahhala.
Ukuba unokuzibamba, ungathandabuzi kwaye uzisebenzise, ​​kuba iiprojekthi zakho ziya kuba ngcono kakhulu.
Kwakhona unikezelwa simahla kwintengiso yomntu kunye neyorhwebo, ILilithDemoness, igama elinalo eli gcisa kwiDeviantArt, ikunika iibhrashi ezili-14, zonke ezisekwe kumachaphaza epeyinti ajongeka ngathi ayinyani, ukuze uwugqibe loo msebenzi weemfuno zakho.
UBrittney Murphy Ink Brushes
Ukuba ujonge ukunika indalo yakho imvakalelo yenyani yoko kuya kufuneka uzame. Uyilo olusekwe kweebhrashi ezifanelekileyo zeFotohop ukuze kubonakale ngathi iinkcukacha zipeyintwe ngesandla, okanye zihlala zilapho.
Umyili wayo ngu UBrittney Murphy kwaye ubonelela ngezi brushes simahla kusetyenziso lwentengiso kunye noluntu. Phakathi kwabo ufumene amabala wedayi, imigca eshinyeneyo kunye necekeceke, njl.
Iibrashi zokwenyani nguEilert Janßen
Ezi brashi ze-Eilert Janßen nazo zisimahla, nokuba uzisebenzisa kwiiprojekthi zobuqu okanye zorhwebo. Zenziwe ngeebrashi ezili-12 eziza kunika imifanekiso yakho imvakalelo ngokungathi ipeyintwe ngesiphawuli.
Ewe, ayingabo bodwa anabo lo myili, kukho Ngaphezulu kwama-300 amabrashi okuphawula afikelelekayo kwizikripthi, uyilo lweshishini okanye ifashoni.
Iibhulashi zolusu lomntu
Ngaba kufuneka unike umzekeliso uvakalelo lolusu lomntu? Ewe, ungathandabuzi, nantsi unokukhetha. Yindalo yomsebenzisi env1ro enikezela kuphela ukuba uyisebenzise ngokwakho (kwintengiso kufuneka umbhalele).
Eli gcisa lasePoland lenze iibrashi zokupeyinta ulusu lomntu, kodwa zisebenza ngokugqibeleleyo ekuchukumiseni okanye ekuthambiseni.
Iibrashi zeFotoshop ezilungileyo kakhulu: Iipeyinti ezikhawulezayo
Ukuba ufuna iipeyinti ezikhawulezayo, ezi nguDarek Zabrocki zilungile. Kwimeko apho ungazi, lo myili yenye yezona zidumileyo emhlabeni, ngakumbi kuba usebenze kwiinkampani ezikhuphe imidlalo efana neHalo Wars 2, Assassin's Creed okanye uMlingo: Ukuqokelela.
Ngoku, ikunika simahla iibrashi zakho, zombini zisetyenziselwa ubuqu kunye nentengiso.
Ukuba into oyifunayo kukunika enye inkangeleko kumfanekiso, ukufota okanye ukuzoba, ngezi brashi unokuziphumeza. Umyili wayo nguDeanOyebo kwaye ziyafumaneka ukuze zisetyenziselwe urhwebo kunye noluntu. Ngapha koko, ifoto ebonelelwe ngumzobi ibonisa ukuba yenziwe ngeebrashi kwipakethi yasimahla.
Iibhulashi ezineglasi eyaphukileyo
Ukuthatha ifoto apho umntu aphula iglasi kulungile. Kodwa ngoku akufuneki ibe ngumbulelo wenene kwiibrashi ezilinganisa oku. Unokufumana iintlobo ezahlukeneyo, Kuya kufuneka ufumane eyona ilungele oko ukufunayo.
Ngaba unokucinga ukuba kungafuneki uzobe izityalo kodwa usebenzise iibrashi? Ewe, yile nto indalo eyenziwe nguB Silvia. Zisimahla (zisetyenziselwa izinto zobuqu nezorhwebo, nangona zifuna ubungqina bobunini).
Nge-Intanethi unokufumana ezinye ezininzi Iibhulashi zeFotoshop ezilungileyo. Kuya kufuneka unikezele ixesha ukufumana into oyifunayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Iifoto zeBhotoshop ezilungileyo
Iinkqubo ezili-10 zokujoyina iiPDF ezininzi